အမေရိကန် Clam Chowder ဟင်းချို - အရသာ ဟင်းလျာများ - ပြော နာမည်ကြီး အရာ
အရသာ ဟင်းလျာများ ပြော မှုအရာတို့ကို, ပုံပြင်များ, ပုံများ, နောက်ခံပုံများ
စပျစ်ရည် အဓိကအစားအစာ သွားရည်စား လတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာ
အမေရိကန် Clam Chowder ဟင်းချို
အမေရိကန် Clam Chowder ဟင်းချိုအတူတကွအာလူးနဲ့ကြက်သွန်နီနှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူတစ်ဦးအမေရိကန်စတိုင်ဟင်းချို, အဓိကပစ္စည်းအဖြစ် Clam ဖြစ်ပါသည်။ နယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder နှင့်မန်ဟက်တန် Clam Chowder ဟင်းချို: နှစ်မျိုးခွဲခြားအမေရိကန် Clam Chowder ။ ယခင်တစ်ဦးမုန့်ဟင်းချို, ခရမ်းချဉ်သီးဟင်းချိုမှအဆုံးစွန်ဖြစ်ပါတယ်။
နယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder သစ်ကိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးက Grand ဧရိယာ၏တဦးတည်းရှယ်ယာ, Clam, ဝက်သား, ကြက်သွန်, ဆလရီ, ပဲနှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့စွပ်ပြုတ်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစောပိုင်း 18 ရာစုအတွင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်သစ်တံငါသည်တစ်ခရီး, လုပ်အစောဆုံးကြောင်းသိရသည်။ နယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder အရှေ့မြောက်ပိုင်းအမေရိကန်အစားအသောက်အတွက်အလွန်ထင်ရှားတဲ့အနေအထားသိမ်းပိုက်။ အဲဒီမှာကဟောပြောပွဲတက်ရောက်ရန်တစ်နေ့ဒီဟင်းချိုမပါဘဲမပွုနိုငျသုံးအစားအစာများဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့အားလုံးနီးပါးအော်ပရေတာဒေသခံတစ်ဦးစတိုင်စားသောက်ဆိုင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော menu ပေါ်တွင်နယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder ဖြစ်ကြောင်းရှိသည်။
မန်ဟက်တန် Clam Chowder, တကယ်တော့အကြားမရှိအခြေခံကွာခြားချက်ရှိနယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder ဟင်းချို။ နယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder အစားအစာအစိတ်အပိုင်းများကို fixed မထား၏အလေ့အထများအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, လူအခြို့အာလူးကိုထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ, လူအခြို့ဒိန်ခဲချန်လှပ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ခရမ်းချဉ်သီးထည့်သွင်းသောအခါ, အရသာအခြေခံအပြောင်းအလဲရှိသည်လိမ့်မယ်, ကမန်ဟက်တန် Clam Chowder ဟင်းချိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့ခိုငျနာမန်ဟက်တန် Clam Chowder ဟင်းချိုများ၏ဇာစ်မြစ်ကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်က Rhode Island ရှိလူပေါင်းခရမ်းချဉ်သီးကိုထည့်သွင်းဖို့အကြောင်းကို 1930 ကိုပထမဦးဆုံးနယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။ ဒီအပါဝင်ပစ္စည်းအကြီးအကျယ်ခရမ်းချဉ်သီးနယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder ဟင်းချို၏အရသာကိုပြောင်းလဲသွားပြီကြောင့်, ဒါကြောင့်အရှေ့မြောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအများတို့သည်လည်းမိန်းနှင့်မက်ဆာချူးဆက်ကာကွယ်၏အထူးသဖြင့်နယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder ဟင်းချိုစွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာ "မန်ဟက်တန်, နယူးယောက်နေထိုင်မှသာလျှင်လူဦးဝမ် Libian ခရမ်းချဉ်သီး join ချင်မှအရူးပါလိမ့်မယ်!" ဟုပြောစိတ်ဝင်စားစရာလူတွေ New York မှာအမှန်ပင်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အခြေခံကျကျသည့်နယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder ဟင်းချိုသစ္စာဖောက်သည်ဟုယုံကြည်အတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်မလုပ်ပဲ အသစ်သောအင်္ဂလန် Clam Chowder ပိုပြီးစျေးကြီးဒိန်ခဲ၏နေရာတစ်နေရာဖြစ်သောခရမ်းချဉ်သီး, ကဆက်ပြောသည်။
1939 ခုနှစ်တွင်တစ်မိန်းဒေသန္တရလွှတ်တော်များတွင်ပင်ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူနယူးအင်္ဂလန် Clam Chowder ဟင်းချိုရန်လိုအပ်ချက်များကိုပိတ်ပင်ရန်ဥပဒေပြဌာန်းအဆိုပြုထား။ Eleanor 1940 ခုနှစ်အစောပိုင်း commented သူမကမန်ဟက်တန် Clam Chowder ဟင်းချိုအတွက်စာအုပ်က "နယူးအင်္ဂလန်ငွေကောက်ခံ" ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ: ရေခဲ Cham horseradish ကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးနှင့်အတူရေချိုးတူသောဤဆိုးဝါး "ပန်းရောင်အရောအနှော" ဖြစ်ပါတယ် ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် Clam ကိုက်ညီဘယ်တော့မှ, မန်ဟက်တန် Clam Chowder သစ်ကိုအင်္ဂလန် Clam Chowder ဟင်းချိုနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရပါ! မည်သည့်ကိစ္စတွင်ဤအဆိုးမြင်ရှိနေသော်လည်းမန်ဟက်တန် Clam Chowder ဟင်းချိုနေဆဲဘုံစားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ယခင် အစုံ: ဘေဂျင်း ကင် ဘဲ
•တောင်ကိုရီးယား ရဲ့ kimchi
•Braised Dongpo ဝက်သား
•ပြင်သစ် ခရု ဟင်း
•ထိုင်း Massaman ဟင်း
•ထိုင်း တွမ် yum ဟင်းချို
•စီချွမ် စပ် ကြက်သား